Obodo Nta na Salt Lake City Car Rental SLC | Carrentalchoice.com
Ụgbọ ala ụgbọ ala dị na Salt Lake City Airport
Gịnị mere ị ga-eji họrọ ụgbọ mmiri dị na Salt Lake City
Salt Lake City nwere ọtụtụ nnukwu ego na ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ naanị n'ihi na ha nwere ezigbo nnukwu ego. E nwere ọtụtụ ebe a na-akpọtụrụ na Salt Lake City na-echere ka ị nye gị mkpịsị ugodi na-aga ezumike. Chọta ebe a na-eburu ụgbọala na-arụ ọrụ nke kachasị mma na akwụkwọ akwụkwọ taa. Ọdụ Ụgbọ Mmiri Salt Lake City bụ ebe dị mma ịmalite ụgbọ ala ị ga-ezumike. Ebe ị na-eji ụgbọ ala na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Salt Lake City, ị ga-enwe ike ịnweta ụgbọ ala ma banye n'ụzọ. E nwekwara ụzọ ndị ọzọ iji bulie ụgbọ ala na Salt Lake City. Mee ndokwa maka otu n'ime ụgbọ ala na-eburu ebe ị ga-eji na-abanye n'obodo ma kpọkọta ụgbọala gị n'ụbọchị ọ bụla. Ị nwekwara ike ịhazi maka ọrụ ụgbọ ala maka ịnyefe gị na ụlọ nkwari akụ gị. Ọtụtụ nhọrọ dị ukwuu pụtara na ị ga-achọ ịchọta usoro kachasị mma maka ezumike gị ma dee akwụkwọ ụgbọ ala n'oge na-adịghị anya.
Nabata na ebe kacha mma maka njem ụgbọ ala dị ala na Salt Lake City, United States. Nnyocha engine anyị zuru ezu ga-achọ ndị na-enye ọrụ mgbazinye n'elu na Salt Lake City, na-enye gị ohere iji tụnyere ma were ụgbọ ala gị. Ebe nrụọrụ anyị na-agbalịsi ike ịbụ ọnụ ọgụgụ-otu ebe maka ụgwọ ọrụ ụgbọ ala gị niile. Ọrụ anyị zuru oke bụ iji nweta ụgbọala gị na okporo ámá Salt Lake City ngwa ngwa ma dị mfe karịa onye ọ bụla ọzọ. Naanị nyochaa ọchụchọ anyị ma họrọ ụgbọ ala ụgbọ ala kwesịrị ekwesị maka nkwụsị gị na Salt Lake City. Anyị na-ede akwụkwọ ụgbọ ala gị ka ọ bụrụ akụkụ kachasị mfe nke usoro njem gị.
Ihe metụtara ụgbọ ala mgbazinye Salt Lake City
Mgbe ị nọ na Salt Lake City na-agbagharị ụgbọ ala gị iji gaa nleta saịtị ndị a ma ama na Salt Lake City dị ka "Ugwu" . I kwesiri ileta ya "Ngosi Ihe Ochie na Utah" iji leba anya n'ile anya n'ime omenala di na Salt Lake City. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị, nwaa nwa nwanne nne nnu Salt Lake City "Nri ehihie DBA School azụghachi" na "Royal Eatery". Nwee obi ụtọ na ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị ibe gị site na ịga "Ebe Nchọta Ezinụlọ".
Ozi ụgbọ elu
IATA Usoro: SLC; Ogologo: 40.783333; Ogologo oge: -111.966667;
Obodo dị na Salt Lake City (SLC) dịka kilomita 7 site na etiti obodo Salt Lake.
Ọdụ Ụgbọ Mmiri Salt Lake City (SLC) na-enye ụgbọ elu iji karịa 72 ebe gụnyere Richmond,Calgary, Paris, Tokyo na Puerto Vallarta. Ọ bụ ụgbọelu 12 na-arụ ọrụ dị ka AeroMéxico, Air France, Alaska ụgbọ elu, American ụgbọ elu na Ụgbọ elu ụgbọelu.
Ebe ndi ozo di nso Salt Lake City Intl.
Bountiful Car ebe
West Jordan Car ebe
South Jordan Car ebe
5 dabere na 19 votes
Nnukwu Airport nke Salt Lake
Chọta ego kacha mma ma gbazite ụgbọ ala na Salt Lake City Intl. (SLC). Zọpụta na njem gị ọzọ na ọnụ ala dị ala na Salt Lake City Intl.